Prof. Abdullahi “Soomaaliya hadda ayey jahadii saxda aheyd qaatay” | Warfaafiye
Warfaafiye Somali News	Prof. Abdullahi “Soomaaliya hadda ayey jahadii saxda aheyd qaatay”
Nov 15th, 2012 – by admin0
“Soomaaliya oo Jahadii saxda ahayd qaatay markii ugu horaysay sanado badan kadib” sidaas waxaa yiri Prof. Abdullahi Ali Hassan Maamulaha Hay’adda Center For Education And Devolopment (CED) oo ka jawaab celinayay doorashdii iyo isbadaladii ka dhacay Soomaaliya gaar ahaan doorashadii Madaxweynaha cusub ee Xasan heekh Maxamuud.
Prof. Abdullahi ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka mid tahay dalalka ugu faqiirsan adduunka kaasoo ay la dageen dadkiisa Dagaalo sokeeye, Abaaro daba dheeraaday, wax soo saarkii breeraha oo hoos u dhac ku yimid waxyeelooyin ka soo gaartay Sunaamigii ku dhuftay qayba ka mid ah dalka.
“Doorashadii Xasan Sheekh Maxamuud Madaxwynaha Cusub waa farxad u timid Soomaaliya sidaa waxa yiri Prof. Abdullahi Ali Xassan sida laga soo xigtay Xarunta dhexe ee Waxbarshada iyo horumarka CED oo ah mid ka mid ah hey’addaha Soomaaliya ee Oxfam Novib ku hoggaamisa xariirka Soomaaliya.
“Soomaaliya waxay lugta saartay Jahadii Saxda ahayd ,taas oo hoggaanka u hayo Madaxwyanaha Soomaaliya oo qaybaha kala duwan ee Bulshada fursado shaqo oo badan u abuuraya iyo isbedal dalka ku yimaada”.
Waxaa jiray isku dayo shirqoolo ah oo Xasan Maxamuud lala damcay laba beri kadib markii uu bilaabay shaqadiisii cusbeed iyo Asbuucya yar kadib oo la dilay mid ka mid ahaa sharci dajiyaashii dalka, kuwaasoo ay dileen Kooxaha mucaaradka sidee u aragtaa arintan iyo mustaqbalka Soomaaliya iyo maxamuud doorashadiisa? ayaa la weydiiyay.
Waa iska cadahay qof kastana waa aragtaa, mudo 20 sano ah in markii ugu horeysay ay Soomaaliya ku socoto tubta nabadda, wadankana wuxuu soo maray dowladdo KMG ah in badan, wuxuuna soo gaaray in dowlad si xornimo ah loo doorto. wixii dhacay doorashadii Madaxweynaha cusub kadib ma bixinayso sawir sax ah oo laga dheehan karo xaaladda mustaqbal ee dalkaan. waxay ahaayeen kiisas urursan oo la maamuli karo kuwaasoo looga hortagi karay meeshii hore. sikastaba ahaatee, si loo hubiyo in dhacdooyinka cabsida leh aysan dib u dhicin, dowladdu waa inay mudnaanta siisaa hirgalinta amniga iyadoo la abuurayo korna loo qaadayo tayada ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo sirdoonka, kuwaasoo ka hortegi doona falaagooyinka gudaha oo ka imaanayay kooxaha hubaysan.
Maxamud waa Macallin waxa uu ka yimid Bulshada rayidka dhexdeeda ma taqaanaa qof ahaan? ayaa la weydiiyay Prof. Abdullahi Ali Hassan, wuxuuna ku jawaabay. “Xasan Maxamud waxaa uu ahaan jiray macallin, xitaa burburkii Dowladdii dhaxe ee Soomaaliya ka hor waxaa si wada jir ah uga shaqan jirnay Jaamacadii Soomaaliya saxiibona waan ahayn waxa uu ahaa nin aad u dabeecaad fiican, caqli badan bulshada dhaxgala xariiriya sidoo kale ku xeeldheer ilaalinta balamaha, waxa uu aaha nin aan ficil ku dhaqaaqin go,aana gaarin asgoo aan la tashi la samayn dadka ka agdhaw”.
Waxaa mar kale la weydiiyay Maxaa ugu malayn kartaa asaga in uu Soomaaliya ku hormarin karo?
“Xasan waqti kooban waxaan u rajaynayaa in uu dalka ku arko kuna hugaamiyo nabad ka hirgasha guud ahaan dalka oo bulshadu ku qabowdo , waxaan ku faraxsanahay in uu dabooli dono dhamaan Soomaaliya dhibaatooyinka ka jira kuwaas oo sanado badan haystay, ma dhici doonto in waqtigaa kooban xal looga gaari waayo , laakin anigoo dhinaca fiican wax ka eegaya, dowaladdu waxa ay xoogga saari doontaa nabadgalyada, ugu danbayntiina waxa ay xoogga saari doontaaa sidii horumar buuxa loo gaarsiin lahaa Dalka.
Fiiri Mxamud Taarikhdiisa Fursadahi shaqo ee u keenay Bulshada Soomaaliyed?
Xasan Maxamud waa furaha xubinta Bulshada Soomaaliyeeed kaasoo u abuuray fursado waxbarasho oo ka hirgaliyay Jaamacada SIMAD ee Magalada Muqdisho ,waxa uu keenay wada shaqayn fiican oo u dhaxaysa Dowalada qeybaheeda kala duwan, iyo Ururada Bulshada rayidka ah ee Soomaaliyeed.
Sidoo kale waxa oo u abuurayaa Bulshada rayidka ah qabhaeda kala duwan in ay helaan fursado shaqo iyo isbedalo ka hirgala dalka kaas oo laga dhax arki doono dhinacyada dhaqaalaha Maamulka bilow ilaa dhamaad Dalka.
Si xal loogu helo Dhibaatooyinka Soomaaliya CED Maxaay qaban doontaa?, waxay ku fikiri doontaa hormarinta dhalinta yar yar gaar ahaan Gabdhaha oo dowladda cusub xooga sari doonto si loo hormarin lahaa
CED waxay xoogga saari doontaa in ay diyaariso ama ay ka jawaabto codsiya kasta oo soo gaaro haday ahaan lahayd isbedalka siyaasadeed kaasoo laga hirgalin doono goob kasta oo Dalkayna ka mid ah , Soomaaliya waxa ay u dhaqaaqi doonta hore ,Dhaqaalo badan Amni buuxa iyo hormar waa qorshahayna saxda ah ee aan hiigsanayno, , waxaa qorshaha ku jira tababare xirfadeed oo loo sameenayo dhalinyarada yar yar eee Somaaliyeed , kuwaas oo aan hubno in ay laf dhabar u yihiin ka qab qaadashada horumarka Dalkayna Soomaaliyeed , waxaa sidoo kale qorshaha ku jira in xooga la saaro waxbrashada Gabdhaha taasoo ah mida kaliya ee maskaxdayna waqti dheer ku fikiraysay.
Recent CommentsXamarCadeey on Rag ka ganacsanayay Hilib Dameer oo lagu qabtay Baladweyneabdullahi on Shabaab oo toogatay nin beeraley ah oo ay ku sheegtay askari DFwarsame on Muqdisho iyo ciyaar dhaqameedka Niikada: DAAWOXamarCadeey on Shabaab oo toogatay nin beeraley ah oo ay ku sheegtay askari DFsuldan on Muqdisho iyo ciyaar dhaqameedka Niikada: DAAWO	Recent Posts	R/wasaare lagu weeraray baradho iyo miyoonees: Video
Muqdisho: 350 oo qaba cudurka HIV AIDS oo daawo qaata